Ny Malwarebytes malaza dia midina avy amin'ny Windows amin'ny Android | Androidsis
Ny suite lehibe iray hafa dia tonga amin'ny Android avy amin'ny Windows, amin'ity indray mitoraka ity hiarovana ny terminal-ntsika amin'ny malware, ary izany dia mampiseho ny fisehoan'ny anarana manan-danja manana traikefa lava amin'ny OS an'ny Microsoft ao amin'ny rafi-piasan'ny finday Google.
vao haingana Google dia nilaza fa latsaky ny 0.001% amin'ireo rindranasa misy dia manimba ary afaka miala amin'ny fiarovana voaorina amin'ny fieritreretana na amin'ny Android na amin'ny fivarotana Google Play. Tarehimarika mahavariana izay tsy mitovy amin'ny fomba fiasa ao amin'ny rafitra fiasan'ny Microsoft, izay amin'ny kinovan'ny OS misy azy raha tsy noraisina ny fepetra sahaza azy dia tatatra tanteraka.
Ny zavatra azo jerena amin'ny fisehoan'ny Malwarebytes avy amin'ny Windows dia ny azy traikefa nahafinaritra sy ny fomba hitondranao azy any amin'ny rafitra fandidiana finday toy ny Android, manampy kalitao bebe kokoa amin'ny repertoire misy an'ny fampiharana anti-malware izay efa ao amin'ny Google Play Store.
Ny rindranasa anti-malware dia miasa amin'ny fitsipiky ny razamben'ny scanner ampiarahina amin'ny tobim-pahalalana fampiharana ratsy. Araka ny filazan'ny orinasa, ny fangatahana mazoto mandinika fianakaviana maherin'ny 200 amin'ny malware amin'ny fotoana tena izy na amin'ny rindranasa na amin'ny fisie ankapobeny.
Ankoatra ny scanner fototra, Malwarebytes dia hanolotra tatitra momba ireo rindranasa afaka mampiasa ny mombamomba anao manokana ary izay ivelan'ny alàlan'ny Play Store. Ny fiasa hafa izay omeny dia ny fanaraha-maso ny fiarovana izay mitatitra ireo fisehoan-javatra mety tsy azo antoka toy ny GPS na tamba-jotra Wi-Fi tsy azo antoka.
Farany, hahita mpitantana fampiharana ianao izay mifehy ny fampiasana loharanon-karena ary mamela izany hanidy azy ireo mihitsy aza. Fifaliana ny fisian'ny anarana manan-danja toy ny Malwarebytes miseho amin'ny Android miaraka amin'ny zavatra niainany efa ela tao amin'ny Windows.
Ny fampiharana dia tena malalaka ary avy amin'ny widget izay ho hitanao etsy ambany dia afaka miditra amin'ny fampidinana azy ao amin'ny Google Play ianao.
Fanazavana fanampiny - Ny sefom-piarovana Android dia mampiseho ny angona fanoherana malware
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Malwarebytes, ny Windows malaza suite manohitra ny malware dia tonga amin'ny Android
Samsung Galaxy S3 manadio taorian'ny fanavaozana ofisialy
Samsung Galaxy Round dia prototype ary hanana famokarana voafetra